Ithegi: ukupapashwa kwemithombo yeendaba | Martech Zone
Ithegi: ukupapashwa kwimidiya yoluntu
Suite yeWebhu yeNtlalontle: Iqonga loLawulo lweMidiya yoLuntu eyakhelwe abapapashi beWordPress
NgoMgqibelo, Matshi 20, 2021 NgeCawa, ngoMatshi 21, 2021 Douglas Karr
Ukuba inkampani yakho ipapasha kwaye ayisebenzisi imithombo yeendaba zentlalo ngokufanelekileyo ukukhuthaza umxholo, uphoswa ngokwenyani kukugcwala kwezithuthi. Kwaye ... ukufumana iziphumo ezingcono, isithuba ngasinye sinokusebenzisa ulwakhiwo ngokusekwe kwiqonga olisebenzisayo. Okwangoku, zikhona nje iindlela ezimbalwa zokupapasha okuzenzekelayo kwindawo yakho yeWordPress: Uninzi lwamaqonga osasazo eendaba anento onokuyipapasha kwi-RSS feed. Ngokhetho,
Esinye sezixhobo zam endizithandayo zokulinganisa kunye nokupapasha ukutya kwe-RSS okanye iipodcast zam kumajelo asekuhlaleni yiFeedPress. Ngelishwa, iqonga alinayo indibaniselwano ye-LinkedIn, nangona kunjalo. Ndizamile ukubona ukuba bazakongeza na kwaye babonelela ngesinye isisombululo-ukupapasha kwi-LinkedIn ngeZapier. Iplagi yeZapier WordPress ukuya kwi-LinkedIn Zapier isimahla kwindibaniselwano yokudibanisa kunye neziganeko ezilikhulu, ukuze ndisebenzise esi sisombululo